အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) – အုပ်စု နှစ်ခု | MoeMaKa Burmese News & Media
အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) – အုပ်စု နှစ်ခု
အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) ၊ ဇွန် ၁၁၊ ၂၀၁၄
ဗုဒ္ဓဓမ္မကုို ဂဃနဏ နားလည်သဘောပေါက်သူ မှန်ပါက လူမျိုးစွဲ ဘာသာစွဲ ရှိမည် မဟုတ်ပါ။ ရွှေကျင်စွဲ သုဓမ္မာစွဲ ရှိမည် မဟုတ်ပါ။ လူစွဲသော်မှ ရှိမည် မဟုတ်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆုိုသော် အစမထင် ဘဝသံသရာမှာ အမြဲတမ်း လူ့ဘဝချည်း ရခဲ့တာ မဟုတ်လုို့ပါ။
ဗမာလူမျိုးချည်း ဖြစ်ခဲ့တာ မဟုတ်သလုို မွန်လူမျိုးချည်းလည်း ဖြစ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါ။ အရှေ့တုိုင်းသားချည်း ဖြစ်ခဲ့တာ မဟုတ်သလုို အနောက်တုိုင်းသားချည်းလည်း ဖြစ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါ။
ဘဝတုိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ချည်း ဖြစ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ချည်း ဖြစ်ခဲ့တာ မဟုတ်သလုို အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ချည်းလည်း ဖြစ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါ။ မြတ်စွာဘုရား အလောင်းတော်ပင်လျှင် ဘဝပေါင်း လေးအသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း ပါရမီဖြည့်ခဲ့စဉ်ကာလမှာ ဘုရားသာသနာတော်နှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့တာ (၉) ဘဝမျှသာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရား အလောင်းတော်အနေဖြင့် ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ မရေမတွက်နုိုင်တဲ့ များစွာသော ဘဝတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီအချက်ကုို ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ မျှမျှတတ ပြန်လည်စဉ်းစားပါက အင်မတန် စိတ်ထားမြင့်မြတ် ဖြူစင်ကြတဲ့ လူမျိုးခြား ဘာသာခြား ပုဂ္ဂိုလ်များဟာ တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိ်န် ဘဝတစ်ခုခုမှာ ပကတိသာဝက မဟာသာဝက စသည် အဖြစ်ဖြင့် ကျွတ်တန်းဝင်မယ့် အလောင်းလျာတွေ မဖြစ်နုိုင်ဘူးလုို့ ဘယ်သူ ငြင်းနုိုင်ပါ့မလဲ???
ဝိပဿနာဥာဏ်ဖြင့် ရုပ်ဓမ္မ နာမ်ဓမ္မကုို အမှန်တကယ် မြင်ပါက ထုိုထုိုအစွဲများ ရှိတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ထုိုထုိုအစွဲသည်ပင် လူမျိုးရေးအစွန်းရောက် ဘာသာရေးအစွန်းရောက် ဝါဒစွဲအစွန်းရောက် အာဏာစွဲအစွန်းရောက်အဖြစ်သုို့ တွန်းပုို့နေတာပါ။ ထုိုထုို အစွဲများ ရှိနေခြင်းသည်ပင် ဗုဒ္ဓဓမ္မရဲ့ အနှစ်သာရကုို မမြင်သေးဘူးဆုိုတာကုို ဖေါ်ပြနေတာပါ။
ရုပ်နာမ်ဓမ္မကုို အသာထား။ သတ္တဝါအားလုံးအပေါ် မေတ္တာမထားနုိုင်သေးသမျှ ဘုရားအဆုံးအမကုို အမှန်တကယ် လုိုက်နာသူလုို့ မဆုိုနိုင်သေးပါ။
သုို့သော် လူမျိုးဘာသာမရွေး နေရာဒေသမရွေး လူရှိနေသရွေ့ အစွန်းရောက်တဲ့ လူတွေလည်း ရှိနေအုံးမှာပါ။ သူတစ်ပါး အစွန်းရောက်မှုကြောင့် မိမိတို့ ပြန်လှန်အစွန်းရောက်ရန် မလုိုအပ်ပါ။ အစွန်းရောက်မှုကုို အစွန်းရောက်မှုဖြင့် တုံ့ပြန်နေသရွေ့ ပြဿနာ ကြီးသထက် ကြီးထွားလာရန်သာ ရှိပါတယ်။
အစွန်းရောက်စိတ်ဓါတ်ဟာ မွေးမြူရန်မဟုတ်။ ပယ်ရှားရန်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစွန်းရောက်သူများဟာ လူများစုကုို ကုိုယ်စားမပြုပါ။ အစွန်းရောက်သူ ၀.၀၁ ရာခုိုင်နှုန်းရဲ့ စကားတွေကုို အေးအေးချမ်းချမ်း နေလုိုကြတဲ့ သာမာန်ပြည်သူ ၉၉.၉၉ ရာခုိုင်နှုန်းအနေနဲ့ နားမယောင်သင့်ပါ။
လူမျိုးရေးအစွန်းရောက်စိတ်၊ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်စိတ်၊ ဝါဒစွဲအစွန်းရောက်စိတ်၊ အာဏာစွဲအစွန်းရောက်စိတ်တွေကြောင့် လူသားများ သေကြေပျက်စီးခဲ့ကြရတဲ့ သမုိုင်းသင်ခန်းစာများကုို မမေ့အပ်ပါ။
သုို့သော် လူဆုိုသည်မှာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ရုပ်ရည်ချင်းမျှသာ ကွာခြားနေတာ မဟုတ်ဘဲ အသိဥာဏ် အနိမ့်အမြင့်၊ အကျင့်သီလ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်မှု ရေချိန်တွေလည်း ကွာဟနေတာ လက်တွေ့မျက်မြင်ပါ။ ဒီလုို ကွာဟချက်တွေဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် အသက်အရွယ် အတွေ့အကြုံအရ ပြောင်းလဲလာတတ်ပေမယ့် ဒါကလည်း လုံးဝဥဿုံ မမှန်ပြန်ပါဘူး။ တသတ်လုံး လူသတ်ဖုို့ အမိန့်ပေးလာခဲ့တဲ့ လူဟာ တတိယအရွယ် ရောက်လာတာတောင် ဒုံဟောင်းဟာ ဒုံဟောင်းပါပဲဆုိုတာ အာဏာရှင် ဦးနေဝင်းရဲ့ နောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းက သက်သေခံနေပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိကြတဲ့ အာဏာရှင်တွေကုို ကြည့်လုိုက်ရင် တူညီတဲ့ အချက်များစွာကုို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ကုိုယ်ကျိုးအတ္တကုို ရှေ့တန်းတင်တာ၊ သူတုို့ရဲ့ မိသားစု ဆွေမျိုးအဝန်းအဝုိုင်းနဲ့ အာဏာရှင်စနစ် တည်မြဲရေးနဲ့ ကုိုယ်ကျိုစီးပွါးအတွက် အပြန်အလှန် ကျေးဇူးရှိကြတဲ့ ရေပေါ်ဆီ အခွင့်ထူးခံ ခရုိုနီ လူတန်းစားဆုိုတဲ့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ လူမှုအသုိုက်အဝန်းထဲမှာ စည်းစိမ်ခံစားကာ ကျေနပ်နှစ်သိမ့် ပျော်မွေ့ နေကြတာတွေကတော့ တထပ်တည်း တူကြတယ်။
သူတုို့ ယုံကြည်ကုိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတရားကတော့ တစ်နုိုင်ငံနဲ့ တစ်နုိုင်ငံ တူချင်မှ တူမယ်။ ဥပမာ မြောက်ကုိုးရီးယားဆုိုရင် ကွန်မြူနစ်စနစ်ကုို လက်ခံကျင့်သုံးတာ ဆုိုတော့ ဘာသာမဲ့ပဲ ဆုိုပါတော့။ ဆီးရီးယားကတော့ အစ္စလမ်ဘာသာပါ။ မြန်မာနုိုင်ငံကတော့ သိကြတဲ့အတုိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာပါ။ ဒါပေမယ့် သူတုို့ရဲ့ နုိုင်ငံသားများကုို ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်တာ၊ အာဏာမြဲဖုို့ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာပြီးရော မူကုို လက်ကုိုင်ထားတာချင်းကတော့ တူကြတယ်။
တကယ်တော့ သူတုို့ အမည်ခံထားတဲ့ ဘာသာတရား ယုံကြည်ကုိုးကွယ်မှုဆုိုတာ သူတုို့ အာဏာမြဲရေးအတွက် လုိုအပ်ရင် ခုတုံးလုပ် အသုံးချဖုို့ထက် မပုိုပါဘူး။ ဘယ်အမျိုးဘာသာကုိုမှ သူတုို့စောင့်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ အာဏာ အသက်ဆက်ရေးအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်မယ် ဆုိုရင်တော့ ဘာမဆုို ယူသုံးမှာပါ။ မျိုးစောင့်ဥပဒေမှ မဟုတ်ပါဘူး။
အရင်းစစ်လုိုက်ရင် အာဏာရှင်တုို့ရဲ့ ကုိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်သလုို အစ္စလမ်ဘာသာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အာဏာသာလျှင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိကြတဲ့ အာဏာရှင်တုို့ရဲ့ ကုိုးကွယ်ရာ ဘာသာ ဖြစ်တယ် ဆုိုတာ သာဓက ထုတ်စရာ မလုိုလောက်အောင် ထင်ရှားပြီးသားပါ။
အာဏာရှင်စနစ်ကုို အသက်ဆက်ချင်နေကြသူတွေကုို အုပ်စု နှစ်ခု ခွဲလုို့ ရနုိုင်ပါတယ်။ ပထမအုပ်စုက အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့် အကျိုးခံစားခွင့် ရနေကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအုပ်စုက အာဏာရှင်များနဲ့ အာဏာရှင်လက်ဝေခံတွေရဲ့ မှိုင်းတုိုက်မှုကုို ခံရပြီး ကုိုယ်ပုိုင်ခေါင်း (ဦးနှောက်) မရှိသူများ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမအုပ်စုက လူလည်လူညစ်များဆုိုတော့ သူတုို့ရဲ့ အတ္တအတွက်ဆုိုရင် ဘနဖူး သုိုက်တူးမယ့် လူတွေမုို့ ပြောစရာ ကုန်နေပါပြီ။ ဒုတိယအုပ်စုအတွက်ကတော့ စိတ်မကောင်းစရာပါ။
အာဏာရှင်ခေတ် တလျှောက်လုံးမှာ လူမျှိုးရေး ဘာသာရေး မှိုင်းတုိုက်မှုတွေကုို အာဏာရှင်တွေ မရုိုးနိုင်အောင် ကျင့်သုံးခဲ့တယ်။ အာဏာရှင်တွေအတွက် ဒီကျင့်စဉ်ဟောင်းက ယနေ့အထိလည်း အသုံးတဲ့နေဆဲပါ။ မှိုင်းတုိုက်သူတွေ ရှိနေလုို့လည်း မှိုင်းတုိုက်ခံရသူတွေ ရှိနေရတာပါ။ မှိုင်းတုိုက်နည်း များစွာထဲမှာ ဘာသာရေးမှိုင်းတုိုက်နည်းက လူဗိန်းကြိုက်မုို့ အရင်းစုိုက်ရ အနည်းဆုံးနဲ့ အသုံးအတဲ့ဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ အပြောများနေတဲ့ ၅၉(စ) ကလည်း တကယ်တော့ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာဃာတနဲ့ ဣဿာ မစ္ဆရိယ ပြယုဂ်တစ်ခုမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာဃာတနဲ့ ပြဌာန်းထားခဲ့တဲ့ ၅၉(စ)ကုို အမျိုးဘာသာသာသနာ စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် တည်ရှိနေသင့်တဲ့ ဥပဒေအဖြစ် အမြင်မှားနေကြသူတချို့လည်း ရှိနေပြန်တယ်။
အာဏာရှင်တုို့ အလိုကျ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကုို ရေးခဲ့ကြတဲ့ လူတွေဟာ အမျိုးဘာသာသာသနာကုို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖုို့ စေတနာနဲ့ ၅၉(စ)ကုို ထည့်သွင်းခဲ့တာလား၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကုို သမ္မတမဖြစ်အောင် ဟန့်တားပိတ်ပင်ဖုို့ ညစ်ပတ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ၅၉(စ)ကို ထည့်သွင်းခဲ့တာလား ဆုိုတာ စဉ်းစားဥာဏ်ရှိသူတုိုင်း သိထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ပုဒ်မ ၄၃၆ နှင့် ၅၉(စ) မပြင်ဆင်ရေး တန်ပြန် ဆန္ဒပြနေကြသူတွေဟာ အထက်မှာ ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ အုပ်စု နှစ်ခုစလုံးမှ လူတွေ ပါဝင်နေမှာ သေချာပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေက သူတုို့ဟာသူတုို့ ညစ်ပတ်တဲ့အကြံနဲ့ ၅၉(စ)ကုို ပြဌာန်းခဲ့တာကုို အမျိုးဘာသာသာသနာ စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် ရှိသင့်တဲ့ ဥပဒေအဖြစ် မှိုင်းတုိုက်သူတွေ ရှိနေသလုို မှိုင်းတုိုက်ခံရသူတွေ ရှိနေတာလည်း အမှန်ပါပဲ။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ပွင့်ပေါ်တော်မူလာခြင်းဟာ ဗုဒ္ဓကုို ယုံကြည်ကြသူများအတွက်မျှသာ မဟုတ်ပါ။ ၃၁ ဘုံမှာ တည်ရှိကြတဲ့ သတ္တဝါဝေနေယျများအားလုံးအတွက် ပွင့်ပေါ်တော်မူလာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားလောင်း အကိတ္တိရှင်ရသေ့ရဲ့ ဆုတောင်းများဟာ လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး အသားအရောင်မရွေး လူသားများအားလုံး အတုယူသင့်တဲ့ ဆုတောင်းများဖြစ်ပါတယ်။ အကိတ္တိရှင်ရသေ့ရဲ့ ဆုတောင်းများကုို နမူနာယူပြီး ဤသုို့ ဆုတောင်းစကား ဆုိုချင်ပါတယ်……………
ဘဝဆက်တုိုင်း အစွန်းမရောက်သူ ဖြစ်ရပါလုို၏။
အစွန်းရောက်သူကုို ဘဝဆက်တုိုင်း မတွေ့မမြင်ရပါလို၏။
အစွန်းရောက်သူအကြောင်း ဘဝဆက်တုိုင်း မကြားရပါလုို၏။
အစွန်းရောက်သူနှင့် ဘဝဆက်တုိုင်း မိတ်ဆွေမဖြစ်ရပါလုို၏။
အစွန်းရောက်သူနှင့် ဘဝဆက်တုိုင်း စကားမပြောရပါလုို၏။
အစွန်းရောက်သူကုို ဘဝဆက်တုိုင်း မနှစ်သက်ရပါလုို၏။
အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) – မြန်မာနုိုင်ငံကုို ဦးဆောင်ထုိုက်သူ (2)
2 Responses to အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) – အုပ်စု နှစ်ခု
Pho Ko on June 11, 2014 at 12:41 pm
There is no words to say about this article except TRUE.
Thet Naing on June 11, 2014 at 8:39 pm
ဆရာတော်ရဲ့ဆောင်းပါးက လက်ရှိဖြစ်နေတာတွေကို သုံးသပ်ထားတာဟာ တည့်နေတာပဲဘုရား။ အကြိုက်ချင်းတူလို့ ဒီစကားပြောတာမဟုတ်ပါ။ ဓမ္မလမ်းကြောင်းအတိုင်း သတ္တိရှိရှိ တင်ပြထားတာ ကျေးဇူးလည်းတင်၊ ၀မ်းလည်းသာ၊ အားလည်းပေးပါတယ် အရှင်ဘုရား။ မြတ်စွာဘုရားပွင့်စက အနတ္တကို ဖွင့်လှစ်ပြလိုက်တာ တစ်လောကလုံးနဲ့ တစ်ယောက်(ကိုယ်တော်တစ်ပါး)တည်းပါ။ မိုးခါးရေ လိုက်မသောက်တဲ့ ဆရာတော်ကို လေးလေးနက်နက် ကန်တော့ပါတယ်ဘုရား။ ဒီလိုဆောင်းပါးတွေ ဆက်ရေးနေဖို့ လိုအပ်နေတာကိုလည်း ဆရာတော် သိရှိပြီးသားပါဘုရား။ သာဓု သာဓု သာဓု ဘန္တေ။